ဒုတိယဒီမိုကရေစီ၊ အမြစ်မရှိသောသစ်ပင်နှင့့့်ခြအုံကြီးအကြောင်း (အပိုင်း-၅) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » ဒုတိယဒီမိုကရေစီ၊ အမြစ်မရှိသောသစ်ပင်နှင့့့်ခြအုံကြီးအကြောင်း (အပိုင်း-၅)
ဒုတိယဒီမိုကရေစီ၊ အမြစ်မရှိသောသစ်ပင်နှင့့့်ခြအုံကြီးအကြောင်း (အပိုင်း-၅)
Posted by asiamasters on Mar 6, 2012 in Editor's Choice, History, Ideas & Plans, Politics, Issues | 10 comments
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးနောက်ပိုင်းမှာ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရကာစ ၁၉၄၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အင်အားကြီးမားလာတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကတော့ ကွန်မြူနစ်စနစ် ဖြစ်ပါ တယ်။ ဆိုဗီယက်ရုရုား ဦးဆောင်တဲ့ ကွန်မြူနစ်စနစ်ဟာ အလွန်လွှမ်းမိုးလာခဲ့တယ်။ အစောပိုင်းမှာ တရုတ်နဲ့ ရုရှားဟာ ကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သဘောတရားရေးရာတူခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ လုံးဝသဘောထားကွဲခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာလည်း ကွန်မြူနစ်စနစ်ကခေါင်းထောင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုကွန်မြူနစ်စနစ်ကို ဦးစီးဦးရွက်ပြုလာတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေ အပေါ်လွှမ်းမိုးဖို့ အတွက် နည်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေ့ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ ရေနံရဖို့နဲ့ သြဇာအာဏာ လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ လုပ်သလိုမျိုးပေါ့။
ကွန်မြူနစ်စနစ်အကြောင်းကို နဲနဲပြောမှရမယ်။ တကယ်တော့ ကွန်မြူနစ်စနစ်ဟာ ဥရောပမှာ စပြီးပေါ်ခဲ့တဲ့ Political Theory တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စပြီးပေါ်လာတာကတော့ Political Theorist တွေဖြစ်တဲ့ ကာလ်းမာခ်နဲ့ အိန်ဂျယ်တို့ရဲ့ Communist Manifesto ကွန်မြူနစ် အရင်းကျမ်းစခဲ့ပါတယ်။ လူသားတွေရဲ့ Political Development သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကို ပြောရရင် အလွန်ရှည်လျှားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အတိုချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင် ကွန်မြူနစ်စနစ်က ယုံကြည်တာက လူသားတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရတာဟာ လူတန်းစားခေါင်းပုံဖြစ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ လူတန်းစားကို အလုပ်သမားလူတန်းစားနဲ့ ငွေရှင်ကြေးရှင်လူတန်းစားဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲခြားတယ်။ ငွေရှင်ကြေးရှင်လူတန်းစားကို ဘူဇွာ (Bourgeois) လို့ခေါ်တယ်။ ငွေရှင်ကြေးရှင်လူတန်းစားတွေဟာ ဖေါက်ပြန်သူတွေချည်းပဲ။ သူတို့ရဲ့ မသမာလောဘ တွေကြောင့် အလုပ်သမားလူတန်းစားတွေကို အမြဲခေါင်းပုံဖြတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ငွေရှင်ကြေးရှင်လူတန်းစားတွေကို ရှုင်းပစ်ရမယ်။ ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို အကုန်ဖျက်သိမ်းရမယ်။ လုပ်ငန်းတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို အများပိုင် (Commune) တွေလုပ်ရမယ်။ အုပ်ချုပ်မှုအာဏာကိုလည်း အလုပ်သမားလူတန်းစားရဲ့ လက်ထဲမှာပဲထားမယ်။ ဗဟိုက ချုပ်ကိုင်တဲ့ Economy ပဲလုပ်ရပါတယ်။
ကွန်မြူနစ်စနစ်အကြောင်းပြောရရင် အရင်းရှင်စနစ် (Capitalism) အကြောင်းလည်းနဲနဲပြောရတာပေါ့။ အရင်းရှင်စနစ်ကတော့ ကွန်မြူနစ်စနစ်ရဲ့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်။ ဗဟိုအစိုးရက အခွန်ကောက်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်။ အရင်းစုဆောင်းနိုင်ဖို့ အဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့လို့ရတယ်။ Private Company တွေဖွဲ့လို့ရတယ်။ Public Company ဖွဲလို့ရတယ်။ ရှယ်ယာတွေရောင်းလို့ရတယ်။ Capital Market တွေရှိတယ်။ အရင်းရှင်စနစ်မှာက ပြိုင်ဆိုင်မှုက အရမ်းပြင်းထန်တယ်။ ငါးအသေးလေးတွေကို ငါးအကြီးကြီးတွေက စားသလိုမျိုးပဲ။ မသန်မာတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံး ဒေါဝါလီခံကြရတယ်။ လူလိမ်တွေက ပိုပြီးအလုပ်ဖြစ်တယ်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာတာကနေ စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားကြတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်ပွဲတွေရဲ့ အစဟာ အရင်းရှင်စနစ်ကလို့ ယူဆကြတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ ကျွန်အဖြစ်ခံစားနေရချိန်မှာ အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ Economy ဟာ အရင်းရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရင်းရှင်စနစ်ကြောင့် မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေဟာ အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ အိန္ဒိယ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လက်ထဲကို ထိုးအပ်ခဲ့ရတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်ကျွန်ဖြစ်သွားရတာကလည်း ဒီအရင်းရှင်စနစ်ကြောင့်ပဲလို့ ဒီခေတ်က လူငယ်ခေါင်းဆောင် တွေမြင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ကွန်မြူနစ်စနစ် ရောက်လာ ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ကွန်မြူနစ်စနစ်ကို အလွန်နှစ်ချိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ကွန်မြူနစ်စနစ်ယူဆောင်လာခဲ့သူကတော့ ဒေါက်တာ ဘမော်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ ကို လက်ခံယုံကြည်တဲ့ မြန်မာလူငယ်တွေမှာ ဆိုဗီယက်ရုရှားရဲ့ အယူဝါဒကိုလိုက်တဲ့သူတွေ၊ တရုတ်ဝါဒကိုလိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ အိန္ဒိယ ဘက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေဆိုပြီး အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံကွဲကုန်ကြပါတယ်။ အရင်းရှင်စနစ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့ ကွန်မြူနစ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံတွေဟာ စစ်အေးတိုက်ပွဲ စဖြစ်ပါတော့တယ်။ တစ်ဘက်နဲ့တစ်ဘက်ဟာ နိုင်ငံငယ်လေးတွေကို လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြိုးစား ကြပါတော့ တယ်။
အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်တဲ့အရင်းရှင်နိုင်ငံတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ကွန်မြူနစ်မဖြစ်သွားစေလိုပါဘူး။ ဗီယက်နမ်တို့၊ ကမ်ဘောဒီးယားတို့၊ မြောက်ကိုရီးယားတို့ဟာ ကွန်မြူနစ်လုံးလုံးဖြစ်သွားကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လည်းကွန်မြူနစ်တို့ရဲ့ မြေပေါ်မြေအောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကို အလူးအလဲ ခံခဲ့ကြရတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကွန်မြူနစ်စနစ်မဖြစ်သွားပါ။ ၁၉၅၀ နဲ့ ၁၉၆၀ အတွင်းလောက်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အကူအညီများစွာပေးခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ Economy ကို အထောက်အကူပြုဖို့ Economist တွေလွှတ်ပေတယ်။ အကြံပေး (Advisor) အမျိုးစုံ၊ အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံတို့အပြင် လက်နက်အကူအညီတွေပါပေးပါတယ်။ ဒါမှာ ပဲခူးရိုးမနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ဘက်မှာ သောင်းကျန်းနေတဲ့ ကွန်မြူနစ်တွေကို တိုက်နိုင်မှာကိုး။ အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ မြန်မာအစိုးရ ပလူးပလဲလုပ်နေပုံက ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေအတိုင်းပါပဲ။ အမေရိကန် အစိုးရက ပြည်တော်သာစီမံကိန်း အကောက်အည်ဖေါ်ဆောက်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြည်လမ်းပေါ်က Summit Parkview ဟိုတယ်နောက်က တိုက်တွေဟာ ပြည်တော်သာစီမံကိန်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးအမြောက်အမြားသုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေက အကူအညီတွေနဲ့ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေလည်း စဆောက်နေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာတော့ ပါလီမန်အထဲမှာ တိုက်ပွဲက အတော်ပြင်းထန်နေပါတယ်။ ဗုဒ္ဒဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်လုပ်လို့ မကျေနပ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားလူနဲစုတွေရှိတယ်။ ဒိအပြင် အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံ တွေက အကူအညီတွေရတော့ သူ့ဒေသမှာ လုပ်မယ်၊ ငါ့ဒေသမှာလုပ်၊ သူလုပ်မယ်၊ ငါလုပ်မယ်နဲ့ လုနေကြတာပေါ့။ တစ်ချို့ကလည်း စက်ရုံတွေအလုပ်ရုံတွေကို ပြည်မမှာပဲလုပ်တယ်။ ငါတိြု့ပည်နယ်တွေကိုတော့ ဘာမှမလုပ်ပေးဘူးဆိုပြီး စိတ်ဝမ်းကွဲလာတွေလည်းရှိတယ်။ ဒိထက်ဆိုးတာ မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေပါပဲ။ အမြီးကျက်အမြီးစားခေါင်းကျက်ခေါင်းစား လူမျိုးတွေဟာ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှာကြတာပါပဲ။ အမေရိကန်တွေရဲ့ အကူအညီတွေအားလုံးဟာ သူတို့အိတ်ထဲပဲရောက်ကုန်ကြတယ်။ တိုက်ပုံတွေတကားကားနဲ့ ခေါင်းပေါင်းတွေတစ်လူလူနဲ့ အားလုံး ညာချ နေသူတွေချည်းဖြစ်လာတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေကလည်း ဒီလိုလူမျိုးတွေကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ မယုံနိုင်တော့ ဘူး။ ဒီတော့ ပင်လုံစာချုပ်မှာ ခွဲထွက်နိုင်ခြင်း (Secession Clause)ကို ပြန်ကိုင်လာကြတယ်။ ဒီ Secession Clause က လွတ်လပ်ရေးရပြီး ၁၀ နှစ်ကြာလို့မှာ မကြိုက်ရင်ခွဲထွက်နိုင်တယ် ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်ဆိုတော့ ၁၉၅၈ ဆိုရင် ၁၀ နှစ်ပြည့်ပြီ။ ၁၀နှစ်ပြည့်ရင်တော့ ငါတို့အားလုံးခွဲထွက်တော့မယ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ အမေရိကန်တွေဟာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကူညီခဲ့ကြသော်လည်း နဂိုကတည်းကိုက ဘာမှ မယ်မယ်ရရမကြိုးစားပဲ ဖေါက်ပြန်နေတဲ့ မြန်မာတွေကို စိတ်ပျက်သွားကြတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်တော်သာစီမံကိန်းကို ရပ်ပြီး စကားတစ်ခုပြောခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာက ခြအုံကြီးနဲ့တူပါတယ်။ ဘာသစ်သားပဲထည့်ထည့် ဒီခြအုံကြီးက ၀ါးပစ်မှာပါပဲ။ အပိုင်း-၆ဆက်ဖတ်ပါ။
အခုမှ တွေ့လို့ အပိုင်း ၁ ကနေ စပြီး ပြန်ဖတ်သွားပါတယ်
အချိန်ကိုက် ရေးလိုက်တဲ့ ပို့စ် ပါပဲ
ဒီပို့စ် ကို ဒေါ်စု လဲ ဖတ် ဦးသိန်းစိန်လဲ ဖတ် ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်လဲ ဖတ် တောကလူလဲဖတ် မြို့ပေါ်ကလဲ ဖတ် ၊ ကရင်လဲဖတ် မြန်မာလဲဖတ် အားလုံးဖတ်ပြီး မြန်မာပြည်အတွက်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်လုပ်သင့်ပါပြီ
နောက်ပို့စ် တွေကို သေချာစောင့်ဖတ်နေပါမယ် ခင်ဗျာ
ဦးလေးလို့ခေါ်မယ်နော် .. ဦးရေးတာ အရမ်းကောင်းတယ် .. အရမ်းလည်းကြိုက်တယ် .. တနေ့နေ့ကြုံရင် ဦးနဲ့ အရက်ဆိုင်လိုက်ထိုင်မယ် .. ကျွန်တော်က အမြည်းစားမှာ အရက်မသောက်တတ်ဘူး .. ပြီးတော့ .. Risk and Benefits ကို ပြေးပြေးသတိရတယ် ..
(အမှန်တော့ ဒီစာသားကိုနောက်ဆုံးမှရေးဖြစ်တာ .. ဒါပေမယ့် ချီးကျူးတယ်ဆိုတာ ဦးစွာ ဖြစ်ရမှာမလား ဒါကြောင့် ရှေ့ဆုံးမှာ ထည့်လိုက်ရခြင်းပါ) ဟီး ..
ဇာတ်ကားထဲမှာ ပေါ့ဗျာ တခါတလေ မင်းသားနဲ့ လူဆိုး တွေ အကြောင့်မသင့်ရင် တညီတညွတ် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရတာတွေရှိတယ် .. ဒါပေမယ့် မင်းသားက ဘာဖြစ်လို့ ပူးပေါင်းတယ် . . လူဆိုးက ဘာဖြစ်လို့ ပူးပေါင်းတယ် . ဆိုတာ . ကတော့ လူတိုင်း သိကြပါတယ် .. ကျွန်တော်လည်း အကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းကိစ္စတွေ ဆိုရင် ပူးပေါင်းမှာ၊ စည်းလုံးမှာ .. ပါဘဲ .. ပူးပေါင်းတယ်ဆိုတာ တကယ်တမ်းတော့ ကိုယ့်အတွက် အကျိုး အမြတ်တစ်ခု ရရှိဖို့ဘဲ မလား .. ။
သယ်ရင်း တစ်ယောက်တခါပြောဖူးတယ် ..
အမေရိကန် သမ္မတ တွေ ကိုကြည့်လိုက် တက်လာတုန်းက ပုံစံက မင်းသားတောင်ရှုံးတယ် .. အဲ နောက် လေးနှစ်လည်းကြပြီးရော … ဟိုး သာဝတိ`ံသာသွား ရတော့ မယ့်အတိုင်းဘဲ ..မှုန်ကုက်ကုက်နဲ့၊ ဆံပင်လည်း ဘိုသီဖတ်သီနဲ့ ..
စဉ်းစားကြည့် သူတို့ က ကသူဋ္ဌေးတွေဘဲ သမ္မတ တစ်ယောက်ရတဲ့ လစာကတောင် သူတို့ လစဉ်ဝင်ငွေကို မမှီဘူး တွေးကြည့်ရင် သမ္မတဖြစ်ရတာ သိပ်မကောင်းဘူး ..ကျွန်တော်လည်း မဖြစ်ချင်ဘူး …
ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့် သူတို့ သမ္မတလုပ်ချင်ကြတာလဲ ဘာဖြစ်လို့ အဲ့လောက်ပေးဆပ်ချင်ရတာလဲ .. ရှင်းရှင်းလေးဘဲ သမ္မတရာထူးမှာ သူလိုချင်တာ ရှိလို့ပေါ့ .. သမ္မတဖြစ်ရင် လူရိုသေရှင်ရိုသေ ဖြစ်မယ်၊ ကျော်ကြားမယ် .. ၊သမိုင်းတွင်နာမည် တစ်လုံး ကျန်ခဲ့မယ် ပြီးတော့ လူတွေ က အားပေးချီးမြှောက်တဲ့ လက်ခုပ်တီး သံကို များကြီး များကြီး ရမယ် သူတို့လိုချင်တာ ဒါဘဲ ..
ဒါကြောင့် ဘာဘဲ ပြောပြော သမ္မတ တွေကို ချီးတော့ကျူးသင့်တယ် ဒါမှ သူလည်း ကျွန်တော်တို့ အတွက် အလုပ်ကို အကောင်းမွန်ဆုံး ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမှာမလား .ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်တို့ သမ္မတ ကို လေးစားပါတယ် .. ချီးကျူးပါတယ် .. သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေ၊ အရှိန် အဟုန်တွေက ဘယ်လောက်ဘဲ ဖင့်နှေးနေပါစေ .. တစ်ခု လုပ်ရင် အခါတစ်ရာလား၊ တစ်ထောင်လား၊ တစ်သောင်းလား၊ ဒါမှမဟုတ် သိန်းချီပြီးတော့လား လက်ခုပ်တီး ပေးနေတယ် ( စာအရနော်ဟီး).
ဆုတောင်းရင် ကျွန်တော်တို့ သမ္မတကြီး .. ဆံပင်အမြန်ပေါက်ပါစေ အဲယောင်လို့ ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေ၊ လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝပါစေလို့ အဲ့တစ်ကြောင်း အမြဲထည့်ရွတ်တယ် ..
(တကယ်တော့ ကျွန်တော်ဘုရားဘဲရှိခိုးတာ တခါမှ ဆုမတောင်းဖူးဘူးပါဘူး .. ဆုတောင်းခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာ )
တကယ်ပြောတာ .. ဒါမှ ပြည်သူအပေါ် ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်တွေ ပေါ်ထွက်လာအောင် ပြုလုပ်ဖို့ သူ့မှာ စိတ်ကူးတွေ အများကြီးရလာမှာ၊ ခွန်အားတွေ အများကြီးဖြစ်လာမှာ၊
ကိုးရီးယားမှာ မင်းသမီးတွေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေကြတယ် (ကြားဖူးတယ်နော်) .. ဘာဖြစ်လို့လည်း .. ပြည်သူတွေက သူတို့ကို အယုံအကြည် မရှိတော့လို့ .. ဒါတောင် မင်းသမီးအဆင့်ဘဲရှိသေးတယ်နော် .. သူ့ကိုလက်ခုပ်တီးပေးတာ တိုင်းပြည် ရဲ့ ပြည်သူ လေးပုံတစ်ပုံလောက် ဘဲ ရှိတာနော် .. သမ္မတ အဆင့် သာ ဆိုရင် စဉ်းသားစားကြည့် .. သူ့ကို လက်ခုပ်တီးပေးမယ့် သူ တွေ ကနည်းနည်း ပဲရှိရင် .. သူက ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေတာထက် ပိုပြီး .. နာကျည်း သွား လိမ့်မယ် .. လက်စားချေလိမ့်မယ် . အဲ လက်စားအချေခံရတာ ကတော့ သိတဲ့အတိုင်း ပြည်သူတွေဘဲ .. ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ .. သမ္မတတိုင်းက .. အဲ့လိုပဲလားဆိုတော့ .. အဟဲ .. လူတကိုယ်စိတ် တမျိုးဆိုတော့ .. ကျွန်တော်လည်း မသိဘူး .. အမှန်ပြောတာ .. ဒါပေမယ့် .. ကျွန်တော်သာ သမ္မတဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် .. တော့ လက်ခုပ်တီး အားပေးတာ လိုချင်မိမှာ အမှန်ဘဲဗျ ..
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ပေါ့ဗျာ .. ဒီနေ့ ဒီနေရာကနေ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အတွက် လက်ခုပ် တီးပေးလိုက်ရပါကြောင်း . ( Post နဲ့ ဆိုင် မဆိုင်တော့ မသိတော့ဘူးဗျို့) ပြောင်းလဲမှုတွေ အတွက် အများကြီး ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း .. (ကျွန်တော့်လက်ခုပ်တွေ အလကားတော့မဖြစ်စေနဲ့နော်)
– ပေးလိုက်သည်။မန်းလေး လူငယ်ဘန်းစကားနဲ့ပြောရင် လေတိုက်တာများသွားတယ်
Post လေးကတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အကောင်းဆုံးအချိန်ကို ရောက်လာခဲ့ပ်ါပြီ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် ကျောင်းစာထဲက သမိုင်းစာအုပ်တွေမှာဆို လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ်အကြောင်း သိပ်မပါပါဘူး ကျွန်တော်ဟာ သမိုင်းကို စိတ်ဝင်စားလွန်းလှသူမို့ ဒီပို့စ်လေးကို အထူးပင်နှစ်ခြိုက်မိပါတယ် ကျွန်တော်ဟာ မြန်မာ့သမိုင်းတွေ ဖတ်ရလေ့ရှိတဲ့အခါတိုင်း ကြက်သီးဖျန်းဖျန်းထလောက်အောင် မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်တွေ ထက်သန်လာလေ့ရှိပါတယ်
နယ်ချဲ့လက်အောက်ကို စ ရောက်ခဲ့ချိန်မှာရော ရောက်ပြီးအချိန်မှာရော ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှ သမိုင်းတွေကို ဖတ်ရတဲ့အခါ အတော်လေးကို မခံချိ မခံသာ ဖြစ်ခဲ့၇ပါတယ်
မြန်မာများ ဘုန်းတန်ခိုးထွားခဲ့စဉ် အနော်ရထာ၊ ကျန်စစ်မင်း၊ ဘုရင့်နောင်၊ အလောင်းဘုရားတို့လက်ထက်က ဇင်းမယ်၊ လင်ဇင်း၊ ယိုးဒယား၊ အာသံ၊ မဏိပူရတို့အထိ အာဏာစက်ပျံ့နှံ့ခဲ့စဉ်က သမိုင်းနောက်ခံ အကြောင်းအရာတွေ ဖတ်ရစဉ်ကများဆိုရင် အရမ်းကိုကျေနပ်အားရမိပါတယ်
တစ်ဖက်သတ်များကျနေသလားတော့ မသိဘူးဗျာ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်လူမျိုးတွေ ကမ္ဘာနဲ့တလွှား လွှမ်းမိုးစေချင်တယ်ဗျာ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေ အချင်းချင်း စည်းလုံးကြစေချင်တယ်ဗျာ
သမိုင်းကြောင်းတွေအရ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် အောင်မြင်ထွန်းပေါက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ သာဓကတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်
နောင်အနာဂတ်မှာ အဲဒီလိုမျိုး အရည်အချင်းရှိကြတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေရဲ့ လက်အောက်မှာ ထွန်းတောက်လာမယ့် အနာဂတ်ကို မျှော်ကြည့်နေမိတယ်
ကျွန်တော်တို့တတွေဟာ စည်းလုံးခြင်းမရှိခဲ့ပဲ သင်းကွဲတွေဖြစ်ခဲ့စဉ်က နိမ့်ပါးခဲ့၇တဲ့ အဖြစ်တွေကို သင်ခန်းစာတွေ ယူသင့်ပါတယ် သမိုင်းက ပေးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို ကောင်းကောင်းစံနာမူနာ ထားသင့်ပါတယ် အနာဂတ်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ သမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကို ရေးထိုးနိုင်ပါစေလို့ မျှော်လင့်လျက်
ကျွန်တော်ရဲ့ Post များကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်ပါက မိမိနဲ့နီးစပ်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအားလုံးကို ဖြန့်ဝေပေးပါရန် အကူအညီတောင်းခံအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှာပါ။
ဟုတ်ကဲ့ ဖြန့်ဝေပေးနေပါတယ်။ သို့ပေသိ ကွန်ဗက်တွေအကြောင်း အခွင့်သင့်ရင်ရေးပေးပါခင်ဗျာ။
ဒီပို့စ်(တွေ)ကို… stick လုပ်ပေးထားပါမယ်..။
ကိုရဲစည် ပြောတဲ့ ကွန်ဗက်ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပါရစေ။ ခရစ်ယာန်သီလရှင်ကျောင်း Convent ကိုပြောတာလား။ ဒါမှမဟုတ် တိုက်ခိုက်ရေး Combat လားဆိုတာသိလိုပါတယ်။ Convent School တွေကို ပြောရရင်ဖြင့် Nunnery တွေ၊ Diocesan တွေ အကြောင်းပြောရတာပေါ့။